အရည်အသွေးမြင့်မားသော SMD-80A Double Wall Paper ဖလားစက်နှင့်ထုတ်လုပ်သူများ Chengda စက်ယန္တရား
SMD-80A Double Wall Paper ဖလားစက်
SMD-80A အသိဥာဏ်ရှိသောစက္ကူခွက်ကိုဂျာကင်အင်္ကျီစက်တွင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဌာနခွဲဒီဇိုင်း၊ ဂီယာမောင်းနှင်မှု၊ လောင်ဂျီတွယ်ဝင်ရိုးဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုထားသောကြောင့်၎င်းတို့သည်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဖြန့်ဝေနိုင်သည်။
PLC system သည်ခွက်တစ်ခုလုံးဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုထိန်းချုပ်သည်။
photoelectric failure ဖြစ်သော detecting system နှင့် servo control feed ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအာမခံပေးပြီးလျင်မြန်။ တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုကိုပေးစွမ်းသည်။
အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်းသည် ၁၀၀pcs / min အထိရောက်ရှိနိုင်ပြီးနို့လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီခွက်၊ ဂယက်ထနေသောခေါက်ဆွဲများ၊ ခေါက်ဆွဲပန်းကန်စသည်တို့တွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသော 8-44OZ ခွက်အကျိတ်ဖွဲ့စည်းရန်အတွက်သင့်တော်သည်။
မြန်နှုန်း 80-100 pcs / min
ဖလားအရွယ်အစား ထိပ်အချင်း: 100mm (max)
အောက်အချင်း: 80mm (max)
အမြင့်: 140mm (max)
ရလဒ် 10KW, 380V / 220V, 60HZ / 50HZ
အသားတင်အလေးချိန် ၃.၀ တန်
လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများကို ၁ နှစ်အာမခံသည်။
စားပွဲအောက်ရှိအစိတ်အပိုင်းများအားလုံးရေနံရေချိုးဖြင့်ချောနေကြသည်။ ၄-၆ လတိုင်းမှာရေနံကိုသတ်မှတ်ထားသောရေနံဖြင့်လဲသင့်သည်။
၁။ တစ်ဆိုင်းလျှင်ခွက် ၃၉၀၀၀ (၈ နာရီ)၊ တစ်လလျှင်ခွက် ၃.၅ သန်းအထိ (ထုတ်လုပ်မှု ၃ ခု) ။
2. ပုံမှန်ထုတ်လုပ်မှုအောက်တွင် Pass ၏ရာခိုင်နှုန်းသည် ၉၉% ထက်ပိုသည်။
3. အော်ပရေတာတစ် ဦး သည်စက်များစွာကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။
ရှေ့သို့ SMD-80B စက္ကူဖလားစက်
နောက်တစ်ခု: PLM-60 စက္ကူ Lid စက်